Pridevestivalen oo maantay furan iyo cabsi dhanka amniga laga qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
haweyney mooto ku fadhida bartanka xafladii pridefestivalen ee sannadkii hores oo lagu qabtay Stockholm. Foto: Bertil Ericson/Scanpix.
Pridevestivalen oo maantay furan iyo cabsi dhanka amniga laga qabo
La daabacay tisdag 31 juli 2012 kl 10.09
Xaflada Pridefestivalen oo maantay furmaysa ayaa la filayaa in ay soo jiidato 45 000 oo ka gayb galayaal ah. Laakiin sidoo kale waxaa Stockholm isku aruursanaya xag jariinta dhanka midigta u janjeera ee naceb muslimiinta, saas darteed ayuu booliska kor ugu qaaday ilaalinta amniga.
- Waxaa sameynay ciidan la tacaala xaaladaha dhalan kara oo si gooniya ula socon doona xaalada casbuuca ay socoto pridefestivalen, ayuu yeri Lars Byström oo ka tirsan Länskriminalpolisen.
Sannadkii hore ayaa xaflada pride lagu qabtay Kungsträdgården, lacag la.aana lagu galayey. Dadka soo booqday ayaa gaaray heerkii ugu sareeyey balse qaban qaabiyaasha ayaa qasaaray lacag dhan afar malyan oo karon. Sidoo kale dood badan ayey dhalisay halka lagu qabtay xaflada taas oo ay dadka ah htb ay la kulmeen aflagaado iyo hadalo bahdilid ah. Laakiin sannadkan waxa xaflada lagu qabanayaa meeshii caadada u ahayd oo ah Tantolunden bartamaha Stockholm. Lacagna waa lagu gali doonaa.
Maalinta sabtida ah ayaa laga cabsi qabaa in ay naqoto mid rabsho wadata. Ururo dibadaha ka yemid oo naceb muslimiinta ayaa ayaguna kulamo ku qabsan doona magaalada Stockholm. Ururadaas ayaa waxaa kamid ah urur la yiraahdo Countar Jihad oo ah urur ka soo horjeeda waxa ayagu ugu wacaan ”islaameynta Yurub” taas oo ay marti qaadeen urur la yiraahdo Swedish Defence League oo xirir la leh urur Ingriis ah oo ay magaca iska shabahaan lana yiraahdo English Defence League.
Laakiin qaban qaabiyaasha xaflada ayaan wax cabsiya ka qabin
- wax welwel ah kama qabno , waxaan qabnaa dad masuul nooga ah amniga lana shaqaynaya booliiska . marka kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa in aysan wax dhibaato ah dhici doonin.